सुनिता थापा मगरको आवाजमा फेरी अर्को गीत "अर्को जुनी" बजारमा ! | Magar Media | मगर सन्चार
मगर मिडिया, माघ २२, काठमाडौँ
देवघाट ३ तनहुँमा जन्मिएकी सुनिता थापा मगरले एक बर्ष कै अन्तरालमा आधा दर्जन भन्दा बढी गीतहरुमा आवाज दीइसकेकी छिन । अहिले फेरी उनले आफ्नै आवाजमा अर्को गीत “अर्को जुनी” बजारमा ल्याएकी छिन । यस गीतमा सुनितालाई राजेन्द्र कँडेलले साथ् दिएका छन् । मदन मगरको शब्द रहेको यस गीतमा नीराज आलेको लय रहेको छ । कपिल लामाको निर्देशनमा तयार भएको यस गीतको म्युजिक भिडियोमा सुरेश श्रेष्ठले छायाँकन गरेका छन् । सिम्रन फिल्म्सले द्रिस्य निर्माण गरेको यो गीतलाई सुजन शाहीले सम्पादन गरेका छन् भने सुपारी म्युजिकले बजारमा ल्याएको छ । यस म्युजिक भिडीयोमा सारिका र बिमल अधिकारीले अभिनय गरेका छन् ।
यो म्युजिक भिडियो हेर्न, तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस:
नेपाल मगर संघ केन्द्रिय समितिकोे सातौ पूर्ण बैठक सम्पन्न, बैठकमा भएका मुख्य निर्णयहरु सहित ।
गायक सुबी राई र चर्चित गायिका मेलिना राईको “यो गाउँले कान्छोलाइ‘..” सार्वजनिक (भिडियो सहित)
२८ पुष २०७४, शुक्रबार १३:३३ Shyam Bahadur Ranamagar 0
२१ भाद्र २०७३, मंगलवार १२:२७ Yamuna Ranamagar 0
कान्छीबाट अभिनेत्री श्वेताको नेपाली चलचित्र जगतमा कमब्याक ! २२ माघ २०७४, सोमबार १५:३७
आदर्श तारा स्मृती कप आयोजकको कब्जामा, पाहुना टोली काहुँ मिलन झापुटार २–० ले पराजित ! २२ माघ २०७४, सोमबार १५:३७
मिनाम लाङ्घाली क्लवद्वारा खुला नकआउट फुटवल आयोजना, स्थानीय लाहुरे टिम बिजयी ! २२ माघ २०७४, सोमबार १५:३७
अब घर घरमा ट्राफिक प्रहरीको कारवाही पत्र ! २२ माघ २०७४, सोमबार १५:३७
विजनेस एण्ड प्रोफेशनल वुमेन सुनाकोठी शाखाको अध्यक्षमा प्रतिमाया पुन चयन ! २२ माघ २०७४, सोमबार १५:३७
दमौलीमा मातृभाषामा साहित्यीक प्रतियोगिता सम्पन्न साथै मगर लेखक संघ तनहुँको अध्यक्षमा बिनु थापा मगर ! २२ माघ २०७४, सोमबार १५:३७
सम्पर्क समन्वय केन्द्रिय समितिको अध्यक्षमा होमराज खपाङ्गी मगर चयन ! २२ माघ २०७४, सोमबार १५:३७
काठमाण्डौँको तिनकुनेमा ल्होछार कार्यक्रम सम्पन्न ! २२ माघ २०७४, सोमबार १५:३७
१९ औं अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसमा तनहुँको भिमादमा बहुभाषिक साहित्यिक प्रतियोगिता सम्पन्न! २२ माघ २०७४, सोमबार १५:३७
अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसको अवसरमा स्याङ्जामा मगर भाषा कविता प्रतियोगिता ! २२ माघ २०७४, सोमबार १५:३७